Kumutsa chishamiso chikuru chenyika iyo "isu, vanhu " of theSangano reUnited Nations, kutsigira i Chibvumirano Chekudzivisa Nuclear Weapons, izvo zvinobvisa mukana wekupunzika kwepasi uye zviwanikwa zvemahara kugadzirisa zvinodikanwa zvakakosha zvevanhu.
Shingairira a Maitiro Anokurumidza Kuronga kupokana nemhando dzese dzepamusoro, rusaruraganda, rusaruro, rusarura uye kushushwa nebonde, zera, dzinza, nyika kana chinamato. .
Incorporate Pasi Pano kune "International Agenda" yeDGGs, kuti ishande zvakanaka kuburikidza nekushanduka kwemamiriro okunze uye zvimwe zvikamu zvekugara kwezvinhu zvisina kusimba.
Kukurudzira Aiwa Kwete Active Violence kuitira kuti rive iro rechokwadi rinoshandura simba renyika, kubva mutsika yekumisikidzwa, chisimba nehondo kuenda kutsika yerunyararo, kutaurirana nekubatana munharaunda imwe neimwe, nyika nenzvimbo mune maonero epasi rose anotapurwa kwatiri neizvi. Nyika Inofananidzira Rugare uye Kusagadzikana.